कोशी अस्पतालमा उपचाररत थप २ जना डिस्चार्ज – BFM 91.2
कोशी अस्पतालमा उपचाररत थप २ जना डिस्चार्ज
विराटनगर, २८ वैशाख । कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रमा उपचाररत थप २ जना आज डिस्चार्ज भएका छन् । डिस्चार्ज हुनेमा भोजपुर हतुवागढीका २६ वर्षीय उपेन्द्र राई र झापा बार्हदशीका ४० वर्षीय महाजिर आलम रहेका छन् ।
राई गत वैशाख १३ गते र आलम वैशाख १४ गते अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनीहरुको पछिल्लो पटक गरिएको स्वाव परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि डिस्चार्ज गरिएको कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्राले बताउनुभयो ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका दुवैजनालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, स्वास्थ्य कार्यालय मोरंगका प्रमुख तथा कोभिड १९ उपचार केन्द्रका व्यवस्थापन संयोजक ज्ञानवहादुर वस्नेत लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो ।
डिस्चार्ज भएका हतुवागढीका राईले गत फागुन ३० गते साउदी अरवबाट नेपाल आएको बताउनुभयो । झापा बार्हदशीका आलमले फागुन २७ गते भारतबाट घर आएको बताउनुभयो । डिस्चार्ज भएका दुवै जनाले अस्पतालले भने अनुसार क्वारेन्टाईनमा १४ दिन बस्ने बताएका छन् ।
राईले भोजपुरको घोडेटारमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाईनमा बस्ने बताउनुभयो । उहाँले तत्काल परिवारको सम्पर्कमा नजाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ मेरा कारणले अरुलाई समस्या नहोस् ।’ बार्हदशीका आलमले घरमै निर्माण गरिएको क्वारेन्टाईनमा बस्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले विदाई गर्दै अनिवार्य क्वारेन्टाईनमा बस्न सुझाव दिनुभयो । कोभिड अस्पतालमा उपचाररत आज २ जना डिस्चार्ज भएसँगै प्रदेश १ बाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या १६ पुगेको छ । अस्पतालमा १९ जना अहिले उपचाररत रहेको कोशी अस्पतालकी मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्राले बताउनुभयो ।
← कोशी अस्पताललाई पिपिइ हस्तान्तरण
भट्टाचोकका मुस्लिम समुदायलाई राहत वितरण →
विराटनगरमा आज २७ जना संक्रमित थपिए
विराटनगरमा पसल सञ्चालन गरेकोभन्दै उम्लिएको तेल खन्याइदिँदा आमा–छोरी घाइते